Ukulungiselela "Prostamol Uno" ngokwanele laziwe kubo bonke nomuthi wokwelapha adenoma Prostatic, okuyinto kunomphumela omuhle lo wendlala. Isetshenziselwa ngesikhathi izimpawu zokuqala nezimpawu prostatitis futhi ebekiwe ikakhulukazi ukuze akhulule isifo.
Naphezu ukuthandwa "Prostamol Uno" izidakamizwa Izibuyekezo ngakho zingatholakala akuvamile, kungase kube ngenxa yokuthi amadoda bayanqikaza ikhuluma ngesihloko buhlungu ngabo. Futhi, nokho, lokhu izidakamizwa isetshenziswa impela eningi abantu.
Umuthi has a evelele isinyathelo eqeda ukuvuvukala kanye antiedematous. It umphumela ezicindezelayo lapho kuvezwa izinto ezenza abantu ekwandeni wendlala izicubu kanye tonic - ephansi ngomgudu womchamo. The main izidakamizwa esebenzayo isithako iyisithelo obukhulu kukhishwe entendeni Sabal, ekuthuthukiseni wendlala exchange inqubo. Umuthi akuphazamisi okuqukethwe emzimbeni hormone ocansini futhi akunamthelela ngqo ku potency ngokocansi.
Ekwelapheni prostatitis ngezigaba lokuqala nelesibili lesi sifo has a omuhle umphumela fitodrug "Prostamol Uno" ngempela. Nobufakazi usho izimpawu zokuqaleka ezifana ukuchama kaningi buhlungu futhi basebenzile, kukhomba nokuvulwa umsebenzi okuzala ka amadoda.
Kusho "Prostamol Uno" (Umyalelo, kobufakazi nesineke kanye nezeluleko Odokotela baxwayisa ukuba banamathele izincomo) udle ngezikhathi zokudla, 1 nesikhathi capsule, okungcono ngesikhathi esifanayo. Umuthi akanayo ukuhlafuna, kodwa baphuze esincane amanzi kuphela. Inkambo yokwelashwa, yebo, ebekwe udokotela kumuntu ngamunye, kuya esigulini. Kodwa ngokuvamile kuthatha okungenani inyanga. On ngesiphakamiso ukuya reception udokotela yemithi kungaba liphindwe. Uma kwenzeka olungekho umthamo esilandelayo capsule olandelayo kufanele kuthathwe ngosuku olulandelayo, ngesikhathi esifanele, ngaphandle kokushintsha umthamo. Umthelela yokwelashwa ingatholakala kulindeleke ngaphambili kuka amasonto ayisithupha kamuva kusukela kuqale ukuvuma njalo.
Izimo Specific ukusetshenziswa kwalesi imithi engekho, ngaphandle hypersensitivity kuya izingxenye zalo. Kodwa ezinye iziguli ukuthatha izidakamizwa isikhathi eside, umuntu angezwa imiphumela ohlangothini kusukela ejenti 'Prostamol Uno ". Izibuyekezo esikhombisa imbangela yabo ukucanuzela kwenhliziyo, ubuhlungu besisu, isilungulela. Ngezinye izikhathi kukhona reddening eqinile kwesikhumba noma isifuba. Kukhona ulwazi olungase kunciphise umfutho wegazi, kodwa kakhulu, lokhu kwenzeka ngabanye, izimo ezikhethekile, ngenxa yethonya ingxenye yemifino lokhu imithi.
Izidakamizwa "Prostamol Uno" iza gelatin amaphilisi. isitoreji Ithemu - akukho kuka iminyaka emithathu. Gcina izidakamizwa kumele kube ezingeni lokushisa hhayi ngaphansana 15 degrees, ebumnyameni, kude nezingane.
Okwamanje Pharmacy bangakunikeza ezingaphezu kweyodwa izidakamizwa elinye kusho "Prostamol Uno". Analogue Ezazimzungezile - imithi "Prostaplant" iphindwa cishe ngokuphelele umphumela wawo umzimba womuntu. Ngo ngezithako zawo, futhi uhluke ngokuthi elikhona akhiphe impande ye sembabazane. Ngo lonke - e lo mshini wezenzo lomuntu, futhi umphumela - kungcono nse. Nakuba akhiphe sembabazane futhi yakhelwe ukwenza ngcono umphumela akhiphe izithelo entendeni saw palmetto, abaningi basathi lesi sidakamizwa "Prostamol Uno" kuyaphumelela.
Lesi sidakamizwa kuthinta izimpawu zesifo, kodwa, ngeshwa, it asikwazi ukuguqulwa livelile emzimbeni yenqubo isifo futhi ubuyisele ngokuphelele impilo. Nokho, tolerability ezinhle, ukuhambisana nanoma yimuphi umuthi, ukuntuleka evelele side effects enze kube nokwenzeka ukuba sicabangele ke buyindlela ephumelelayo. Izidakamizwa "Prostamol Uno" kobufakazi isiguli kuqinisekiswe ngokuphelele, ngcono izinga lempilo amadoda.
Isayensi ukuthi etadisha zomzimba? Human Physiology nezinto ezincane eziphilayo
Wegener sika granulomatosis - Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa.
"Fosinopril": yokusetshenziswa. "Fosinopril": izinkomba ukusetshenziswa, nozakwabo yangempela